April | 2012 | Dr Ko Ko Gyi's Blog
TQ my good Bama friends for understanding
TQ saya Atta Kyaw. May I share this in FB and blog? You have reminded me of my secret thought since young: “Whether Allah would punish me for not beenaMuslim if I were not born to the Muslim parents, but born into the Buddhist parents or Christian etc, From that I extended my thoughts that my friends and neighbours should not be punished by God or hate by me just because they are born into the parents with different faith.
Tags:Allah, Buddhism, Christian, Christianity, God, Hindu, Jews, Muslim
ကိုယ်ကျိုးရှာ စီးပွားရေးသမားများ၏ ဘာသာရေးမှိုင်းတိုက် တိုင်းပြည်မီးလောင်တိုက်သွင်းမှု့
Source:MMSY-ကိုယ်ကျိုးရှာ စီးပွားရေးသမားများ၏ ဘာသာရေးမှိုင်းတိုက် တိုင်းပြည်မီးလောင်တိုက်သွင်းမှု့
မကွေးတိုင်း ကမ္မတွင် ဧပြီ ၁၃ ရက်နေ့ က မွတ်စ်လင်မ်ဆုတောင်းဝတ်ပြုဆောင်ကို ဖျက်ဆီးပြီး အိမ်များကိုလည်း ၀င်ရောက်ဖျက်ဆီးကာ ပစ္စည်းများကို တရားဥပဒေမဲ့ လုယူသွားကြသည်။ အိမ်များကိုရွေးချယ်ဖျက်ဆီးခြင်း၊ ဆုတောင်းဝတ်ပြုဆောင်ကိုဖျက်ဆီးခြင်းဖြစ်၍ ဤအဖြစ်အပျက်သည် ဘာ သာရေး ပြသနာကဲ့သို့ဖြစ်လာသည်။ အမှန်မှာ ဤကိစ္စသည် စီးပွားရေးသမားအချင်းချင်း ပြိုင်ဆိုင်ရာမှာ ကြံ့ဖွံ့အမတ်နှင့် သူ၏ကျောထောက်နောက်ခံ စီးပွားရေးသမားများက ပြည်သူများအား ဘာသာရေးမှိုင်းတိုက်ကာ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားရှာခြင်းသာဖြစ်သည်။
Tags:People, Riot, Violence and Abuse
Source: မြန်မာမွတ်စလင်များ၏ သာသနာရေးဆိုင်ရာနှင့် အိုးအိမ်များ အဖျက်ဆီးခံရမှုအပေါ် ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက်ခြင်း
အမိမြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီ၊ လူ့အခွင့်ရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုများ တိုးတက်လာမှုကြောင့် တိုင်းရင်းသားများပေါင်းစုံ ရဟန်းရှင်လူပြည်သူများက မျှော်လင့်ချက်ထား ဝမ်းသာအားရဖြစ်နေရသော ယခုလို အချိန်အခါမျိုးတွင် ကျောက်ပန်းတောင်း၊ ဆိုင်းတောင်(ကချင်ပြည်နယ်)နှင့် ကံမမြို့များတွင် မြန်မာမွတ်စလင်များ၏ သာသနာရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အဦးများနှင့် အိုးအိမ်များကို ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းဆန်ဆန် လူစုလူဝေးဖြင့် ဥပဒေမဲ့ တရားလက်လွတ် အနိုင့်အထက် ဖျက်ဆီးခဲ့ခြင်းများကို မြန်မာမွတ်စလင် အစည်းအရုံးက ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက်လိုက်သည်။
Tags:Armenian Genocide, Barack Obama, Bosnia, Fascism, Holocaust, Human rights, Nationalism, Ukraine
Statement on Pha Kant and Kamma Issue of Former Political Prisoners (Burma) (DVB)
ယခင် စစ်အစိုးရလက်ထက်တွင် အခွင့်ထူးခံ ဦးစားပေး လေလံဖြင့် စက်လှေလုပ်ကိုင်ခွင့် ရခဲ့သော်လည်း ယခုဒီမိုကရေစီ အစိုးရ လက်ထက်တွင် ဈေးပြိုင်လေလံ စနစ်ဖြင့် လေလံစွဲ ရာတွင် မယှဉ်ပြိုင်နိုင်သဖြင့် ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရမူအပေါ် မကျေနပ်ပဲ လွန်ခဲ့သည့် ဧပြီလ ၁၃ ရက် နေ့မှ ၁၅ ရက်နေ့အတွင်း မကွေးတိုင်း ကမ္မမြို့နယ်ရှိ လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်း ဖြစ်စေရန် လှုံဆော်ပြီး လူစုလူဝေးဖြင့် အကြမ်းဖက်ဝင်ရောက် လုယက် တိုက်ခိုက်မူများဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ (more…)
Archives Select Month December 2018 (1) November 2018 (7) October 2018 (9) September 2018 (3) August 2018 (3) May 2018 (3) April 2018 (1) March 2018 (1) January 2018 (1) December 2017 (1) November 2017 (2) July 2017 (3) May 2017 (2) April 2017 (4) March 2017 (1) February 2017 (1) January 2017 (1) December 2016 (2) November 2016 (2) October 2016 (1) September 2016 (1) August 2016 (6) July 2016 (4) June 2016 (3) May 2016 (7) April 2016 (2) February 2016 (2) January 2016 (5) December 2015 (6) November 2015 (1) October 2015 (17) September 2015 (9) August 2015 (11) July 2015 (8) June 2015 (9) May 2015 (29) April 2015 (68) March 2015 (106) February 2015 (89) January 2015 (90) December 2014 (111) November 2014 (188) October 2014 (182) September 2014 (135) August 2014 (72) July 2014 (154) June 2014 (49) May 2014 (114) April 2014 (199) March 2014 (338) February 2014 (279) January 2014 (240) December 2013 (159) November 2013 (230) October 2013 (212) September 2013 (185) August 2013 (149) July 2013 (235) June 2013 (198) May 2013 (254) April 2013 (340) March 2013 (233) February 2013 (139) January 2013 (80) December 2012 (109) November 2012 (204) October 2012 (227) September 2012 (118) August 2012 (122) July 2012 (90) June 2012 (167) May 2012 (52) April 2012 (64) March 2012 (32) February 2012 (16) January 2012 (50) December 2011 (19) November 2011 (19) October 2011 (26) September 2011 (30) August 2011 (29) July 2011 (57) June 2011 (28) May 2011 (39) April 2011 (37) March 2011 (23) February 2011 (34) January 2011 (48) December 2010 (96) November 2010 (56) October 2010 (44) September 2010 (37) August 2010 (47) July 2010 (34) June 2010 (20) May 2010 (17) April 2010 (37) March 2010 (21) February 2010 (12) January 2010 (24) December 2009 (14) November 2009 (30) October 2009 (49) September 2009 (24) August 2009 (4) July 2009 (4) June 2009 (6) May 2009 (8) April 2009 (8) March 2009 (34) February 2009 (3)
Nikah of Dr. Azlan and Dr. Syazana
သစ်ထူးလွင် မန္တလေးကို မီးလောင်တိုက်သွင်းဖို့ ကြံနေပါပြီ